रिपोर्ट नेपाल | 2020 Oct 23 | 04:32 pm	301
भारतीय खुफिया एजेन्सी रअ का प्रमुख समन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भएको भेटवार्तालाई प्रेस सल्लहकार सूर्य थापाले पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले बिहीबार बक्तव्य जारी गरेर रअ प्रमुखसँग भेट भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण गोप्य राख्ने प्रयत्न गरिनु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडादशैं २०७७ का अबसरमा देशबासीको नाममा दिएको शन्देसको कार्डमा समावेश गरिएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई काटिनु संयोग मात्रै मान्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्शा समावेश गरिएकै कारण विद्यालयको पाठ्यपुस्तक विमोचन नगर्ने निर्णय यस अघि नै लिइसकेका थिए । सार्वभौम संसदले पारित गरेको नेपालको नक्शा समेटेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बिद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक तयार गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सार्वजनिक गर्न दिएनन् । किन दिएनन् ? भन्ने सन्दर्भमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लहकारहरुले अनौपचरिक रुपमा भनेका थिए–‘शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको माओवादीद्धन्दलाई गुणगान गाइएको लम्वेतान शुभकामना सन्देश समाबेश गरिएका कारण स्थगित गरिएको हो, लिम्पियाधुराको नक्शा समावेश भएका कारण स्थगित गरिएको भन्ने कुरा निराधार हो ।’ त्यो काण्डलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताहरुले कतिसम्म भन्न भ्याएका थिए भने –‘प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी अभियान विरुद्ध प्रतिगामी शक्ति, भारतीय दलालहरु र नेपाली कांग्रेसले मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।’ ओलीमा राष्ट्रवादी रुझान छ कि भन्ने यस पंक्तिकारलाई पनि लागेको थियो ।
दलका प्राय सबै जसो शीर्ष नेताहरु भारतीय इसारामा चल्ने गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली थोरै मात्रै भए पनि फरक हुन् कि जस्तो यस पंक्तिकारलाई लाग्नुमा दुई वटा कारण थिए । पहिलो कारण त ओलीले संविधान निर्माणका बेला जातीय राज्य बनाउने माओवादी अभियानलाई परास्त बनाएको जस्तो देखिएको थियो । साथै नेपालाई भारतको अर्धउपनिबेश बनाउने मधेसीदलको प्रयत्न पनि ओलीकै कारण तुहिएको हो कि जस्तो देखिएको थियो । भारतले लगाएको नाकावन्दीका बेला ओलीले दिएका अभिव्यक्ति सराहनीय पनि थिए । नेपालका कुनै पनि शासकले खुलेआम बोल्न नसकेको कुरा ओलीले बोलेका थिए । त्यस कारण पनि ओलीलाई देश प्रति माया रहेछ कि ? भन्ने यस पंक्तिकारलाई लागेको थियो । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकार राष्ट्रवादको जगमा उभिएर बनेको हो । अहिले भारतले नेपालको सीमा मिचेको अवस्था छ र वार्ताका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि मानिरहेको छैन । यस्तो बेलामा राजनीतिक तहमा छलफल र वार्ता हुनुपर्नेमा अपारदर्शीरुपमा भएको गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणले सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विषयमा पुराना कम्युनिष्ट नेता अमिक शेरचनले दिएको एक अन्तर्वार्ता पढ्दा र ओलीका ती क्रियाकलाप हेर्दा दिमाग चक्कराउँथ्यो । त्यो अन्तरवार्तामा अमिक शेरचनले भनेका छन् –‘अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदै थियो , गिरिजाबाबुले राती गोप्य रुपमा वालुवाटार बोलाउनु भयो । म राती ११ बजेतिर अंगरक्षक नलिई ट्याक्सी चढेर सुटुक्क वालुवाटार छिरेँ । उहाँले भन्नु भयो –‘भारतले संविधानमा खतरनाक कुरा छिराउने प्रयत्न गरेको छ, यो कुरा छिर्यो भने नेपाल उपनिवेश हुन्छ, जसरी हुन्छ यसलाई तुहाउनु पर्यो । भोलीको क्याविनेट बैठकमा एक जनामन्त्री मार्फत त्यो प्रस्ताव आउने सुचना मैले पाएको छु ।’ गिरिजाबाबुको यो भनाई पछि म गम्भीर भएँ, कुनै हालतमा पनि तुहाउने अठोट लिएर निवास फर्केँ, तर कुन मन्त्री मार्फत भारतले यो प्रस्ताव ल्याउँदै रहेछ त ? भन्ने कुरा रातभरी मनमा खेल्यो, कांग्रेस वा सद्भावना पार्टीका कुनै मन्त्री मार्फत आउने होला भन्ने अनुमान गरेँ । भोलिपल्टको क्याविनेट बैठकमा त परराष्ट्र मन्त्री मार्फत पो यो कुरा आयो । रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मा भारतलाई दिने गरीसंविधानमा समोवश गर्ने प्रस्ताव आयो ।’
शेरचनले त्यो अन्तरवार्तामा ती परराष्ट्रमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेका छैनन् । तर त्यतिबेला केपी शर्मा ओली परराष्ट्र मन्त्री थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछिको सेरोफेरोलाई हेर्दा अमिक शेरचनको त्यो भनाई केवल आरोप मात्रै हो कि जस्तो लाग्थ्यो । तर यतिबेला ठूलो रहस्य उद्घाटिक भएको छ । स्याललाई बाघको छाला ओढाएर शिकार गर्न पठाइए जस्तै आफ्नो खुद एजेण्ट ओलीलाई राष्ट्रवादको छाला ओढाएर भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको त होइन ? भन्ने अनुमान त्यतिबेला केहीले गरेका थिए, तर ती अनुमान गर्नेहरुलाई यस पंक्तिकारले दुत्कार्ने गरेको थियो । आखिर हो रहेछ कि जस्तो देखियो । नेपालको राष्ट्रियताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बाबुराम र प्रचण्ड दोब्बर खतारा, बाबुराम र प्रचण्ड भन्दा ओली चौवर खतरा भन्ने टिका टिप्पणी उतिबेलै हुने गर्थे । आखिर किन गरिएको रहेछ ? भन्ने रहस्य अहिले खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको शुभकामना कार्डमै नेपालको नक्सामा केही भूभागहरु गायव हुनु सानोतिनो प्रकरण हुँदै होइन । अरु मुलुकमा भएको भए यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालै अपधस्त गरिन्थ्यो । तर नेपालमा अझै पनि काइते तर्क दिएर ओलीको अपराध ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा भारत परस्त शक्तिहरु लागेका छन् । लिम्पियाधुरामा नेपालको अधिकार कायम गराउने प्रयत्न होइन कि, उल्टै भाग्ने प्रयत्नमा ओली लागेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
शुभकामना कार्डमै नेपालको नक्सामा केही भूभागहरु गायव भएको प्रकरण सिधै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओली सँगको गोप्य भेटघाट सँग गाँसिएकोले त्यही प्रसंगबाट यो आलेख अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु । प्रश्न उठेको छ –‘के रअका प्रमुख उनको नेपाली समकक्षी नेपालको गुप्तचर निकायका प्रमुखको निमन्त्रणामा आएका हुन् ? के त्यसरी आउँदा उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेका हुन् ? यदि हुन् भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पार्नु पथ्र्यो । उल्टै लुकाउने प्रयत्न गर्यो । मिडियामा छताछुल्ल भए पछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली गले । विदेशी कर्मचारीले हाम्रा प्रधानमन्त्री सँग भेटघाट गर्न पाउँछन्, गर्नु पनि पर्छ । तर भेटघाटको आफ्नै विधि हुन्छ, आफ्नै मर्यादा हुन्छ । यो भेटघाटमा विधि र मर्यादाको पालना नगरिनुको रहस्य के हो ? यदी गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ‘विशेष दूत’का रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाएका हुन् भने एक्ला एक्लै पनि भेट हुन सक्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत नभएर कर्मचारीकै रुपमा गोयल नेपाल आएका हुन् । उनी भारतको जुन तहमा कार्यरत छन् त्यो तह भनेको नेपालको सहसचिव स्तर हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा नेपालको तर्फबाट पनि सहसचिव स्तरका कुनै कर्मचारी राखिनु पथ्र्यो । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो देशकोमुख्य मन्त्री सरह होइन कि ? सहसचिव सरह ठानेको रहेछ कि ? जस्तो देखियो । या त भारतको हेपाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेका हुन्, या त प्रधानमन्त्री ओली बाबुराम भट्टराईकै तहका भारतीय हितैषी हुन् भन्ने आंकलन गरिएको छ । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको संकेत देखिएको छ । यो भेटले नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो आक्रमण भएको छ ।
लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक वार्ताका लागि गरेको पत्राचारको जवाफ दिल्लीले नदिने र अर्कोतिर खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, यस्तो भेटपछि प्रधानमन्त्रीको कार्डमा छापिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायव हुने परिस्थिति निकै पेचिलो हो । यसले नेपाली कूटनीति भारतसँगको सम्बन्धमा कुन तहमा झरेको छ भन्नेमात्र स्पष्ट पार्दैन, अन्य देशहरूसँगको हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि अत्यन्तै हलुका र सस्तो बनाइदिने निश्चित छ ।
अर्को रहस्य के छ भने भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयल विमान चार्टड गरेरै नेपाल आए । उनको टोलीमा कति जना आए , के को आए ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै गोप्य राखेको छ । यतिबेला अर्काे प्रश्न चिन्ह पनि उत्पन्न भएको छ । गोयललाई भारत सरकार आफैंले पठाएको हो कि नेपाल सरकारको आग्रहमा आएका हुन् ? अघिल्लो दिन मात्रै कूटनीतिक अनुमति मागेर भारतीय उडान भोलिपल्ट बुधबार मध्यान्ह त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लियो । सो उडानमा भारतका को–को कूटनीतिज्ञहरु आएका थिए भन्ने विषयमा उडानको अनुमति दिने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही जानकारी नभएको हो कि गोप्य राखिएको हो ? कुटनीतिक अनुमति मागेर गुप्तचरहरु पठाउन मिल्छ ? मिडियाले जनाए अनुसार गुप्तचर प्रमुख गोयल काठमाडौं आउने दिन प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सक्रियता देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री बुधबार साँझसम्म सुरक्षा परिषदको बैठकमा व्यस्त बनेका थिए । सुरक्षापरिषदको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गरेका थिए । गोयलको यो भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भने केही बताउन सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने, यसको सबै तारतम्य प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीको तहबाटै मिलाइएको छ । रअ प्रमुख सामन्तले काठमाडौंमा क–कसलाई भेटे भन्नेबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । केवल एयरफोर्समा आउने टोलीलाई अनुमति दिनमात्रै परराष्ट्रसँग अनुमति मागिएको तर, काठमाडौंमा हुने भेटघाटको अनुमति मागिएको थिएन । जबकि कोही पनि विदेशीले नेपालमा आएर राजनीतिक भेटघाटहरु गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई भेट्न मिल्दैन । अनुमति लिएर भेट गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई साथमा राख्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भेट्दा पनि विदेशीले अनुमति लिनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको आचारसंहितामा छ । तर, यतिबेला सो कूटनीतिक आचारसंहितालाई लत्याइएको छ । गोयलले काठमाडौंमा क–कसलाई भेटे भन्ने सरकारले खुलाएको छैन ।
नेपालले सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको समयमा खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरु भ्रमणमा आउनु र नेपालका नेताहरुसँग खुला रुपमा भेटघाट गर्नु सामान्य विषय होइन । नेपालले दुई देशका परराष्ट्र सचिव एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक गर्न भनिरहेको छ, तर भारतले कोभिडको कारण देखाउँदै सम्भव नभएको बताउँदै आएको छ । भारतले अन्य छिमेकी देशहरुसँग भने कोभिडकै बेलामा वार्ताहरु गरिरहेको छ । नेपाललाई चाहिँ उसले उपेक्षा गर्दै आएको छ । कतै विगतमा जस्तै नेपाल मामिलामा खुफिया एजेन्सी हावी भएको त होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ ।
भारतीय संचार माध्यमहरुले पनि उनी राजनीतिक मिसन लिएर नेपाल भ्रमणमा आएको उल्लेख गरेका छन् । उच्च भारतीय स्रोतलाई उल्लेख गर्दै भारतको दि प्रिन्ट अनलाइनमा लेखिएको छ– ‘गोयल काठमाडौंमा केही घन्टा मात्र रहनेछन् र त्यस क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका प्रतिद्वन्द्वी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर पार्टीको द्वन्द्वको अवस्था मूल्यांकन गर्नेछन् र त्यसको सम्भावित नतिजा थाहा पाउने प्रयास गर्नेछन् ।’ त्यसैले यो भेटघाटलाई कुनै पन हालतमा सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।